နှစ်ဟောင်း (၂၀၂၀)ခုနှစ်တွင်း ဖြစ်ခဲ့ပုံ အမှတ်တရလေးတွေကို ပြောရင်း နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုခဲ့တဲ့ အေးမြတ်သူ – Askstyle
နှစ်ဟောင်း (၂၀၂၀)ခုနှစ်တွင်း ဖြစ်ခဲ့ပုံ အမှတ်တရလေးတွေကို ပြောရင်း နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုခဲ့တဲ့ အေးမြတ်သူ
Cele Active World ပရိသတ္ႀကီးေရ မင္းသမီးေခ်ာ ေအးျမတ္သူကိုေတာ့ အထူးအေထြ မိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုေအာင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္.။ ေအးျမတ္သူကေတာ့ ေမာ္ဒယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ စတင္ကာ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အခုဆိုရင္ အကယ္ဒမီ မင္းသမီးတစ္လက္အျဖစ္ ထိပ္တန္းမွာ ရပ္တည္ေနသူပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.။
ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုကာ ႏွစ္ေဟာင္းကို ႏႈတ္ဆက္တဲ့စာေလးနဲ႕အတူ သူမရဲ႕ ပံုရိပ္ေလးေတြကို မျမတ္ေလးက ဒီေန႕မွာ “….(၂၀၂၀)….. လွပတဲ့နံပါတ္ေလးမို႔ … ႐ူးသြပ္ခဲ့ဖူးတယ္… လွပသေလာက္လည္း ရက္စက္ခဲ့တဲ့..(၂၀၂၀)….တစ္ႏွစ္တာၿပီးဆုံးသြားတဲ့ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္မွာ … အလွဆုံးအၿပဳံးနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္……ဘာေတြကအေရးႀကီးလည္း ဆိုတာ သင္ၾကားေပးသြားခဲ့သလို…. ဘာေတြလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာေတြပါ ၫြန္ျပေပးခဲ့တဲ့….. (၂၀၂၀) …..………။
အဆိုးထဲက အေကာင္းေတြသင္ယူခြင့္ရခဲ့ပါတယ္…ဆႏၵတခ်ိဳ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္မရလိုက္ေပမယ့္ အက်ိဳးရွိေစတဲ့အရာေတြ ထပ္ရခဲ့လို႔ ေက်နပ္ပါတယ္…အဆိုးေတြေပးၿပီး မင္းထြက္သြားလည္း မျမတ္ေလး က အလွဆုံးအၿပဳံးနဲ႔မင္းကို ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္ …(၂၀၂၀)…. ငါ့ခြန္ငါ့အားေတြ ကို ယုံၾကည့္လို႔ မင္းကို အရႈံးေပးခ်င္စိတ္ ..ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္ေတြ .. ရွိမေနခဲ့ဘူး (၂၀၂၀)….. ။
မင္း ကို အသုံးခ်ၿပီး (၂၀၂၁) အတြက္ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ခြင့္ရခဲ့လို မျမတ္ေလး မင္းကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္….” ဆိုၿပီးသူမရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္လာခဲ့ပါတယ္။. ေအးျမတ္သူနဲ႕ အတူ ႏွစ္ေဟာင္းကို ႏႈတ္ဆက္တဲ့စာေလးေတြကို ပရိသတ္ႀကီးလည္း မွတ္ခ်က္မွာ ေရးခဲ့ပါဦးေနာ္.။ ဖတ္ရႈ႕ေပးခဲ့ၾကတဲ့ Cele Active World ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေပ်ာ္ရႊင္သာယာတဲ့ ေန႕ေလးတစ္ေန႕ကို ပိုင္ဆိ္ုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္.။
Source: Aye Myat Thu’s Facebook
“နှစ်ဟောင်း (၂၀၂၀)ခုနှစ်တွင်း ဖြစ်ခဲ့ပုံ အမှတ်တရလေးတွေကို ပြောရင်း နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုခဲ့တဲ့ အေးမြတ်သူ”
Cele Active World ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချော အေးမြတ်သူကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ အေးမြတ်သူကတော့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စတင်ကာ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် အကယ်ဒမီ မင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ် ထိပ်တန်းမှာ ရပ်တည်နေသူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကာ နှစ်ဟောင်းကို နှုတ်ဆက်တဲ့စာလေးနဲ့အတူ သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို မမြတ်လေးက ဒီနေ့မှာ “….(၂၀၂၀)….. လှပတဲ့နံပါတ်လေးမို့ … ရူးသွပ်ခဲ့ဖူးတယ်… လှပသလောက်လည်း ရက်စက်ခဲ့တဲ့..(၂၀၂၀)….တစ်နှစ်တာပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာ … အလှဆုံးအပြုံးနဲ့ နှုတ်ဆက်ပါတယ်……ဘာတွေကအရေးကြီးလည်း ဆိုတာ သင်ကြားပေးသွားခဲ့သလို…. ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာတွေပါ ညွန်ပြပေးခဲ့တဲ့….. (၂၀၂၀) …..………။
အဆိုးထဲက အကောင်းတွေသင်ယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်…ဆန္ဒတချို့ အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်မရလိုက်ပေမယ့် အကျိုးရှိစေတဲ့အရာတွေ ထပ်ရခဲ့လို့ ကျေနပ်ပါတယ်…အဆိုးတွေပေးပြီး မင်းထွက်သွားလည်း မမြတ်လေး က အလှဆုံးအပြုံးနဲ့မင်းကို နှုတ်ဆက်ပါတယ် …(၂၀၂၀)…. ငါ့ခွန်ငါ့အားတွေ ကို ယုံကြည့်လို့ မင်းကို အရှုံးပေးချင်စိတ် ..ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေ .. ရှိမနေခဲ့ဘူး (၂၀၂၀)….. ။
မင်း ကို အသုံးချပြီး (၂၀၂၁) အတွက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ခွင့်ရခဲ့လို မမြတ်လေး မင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….” ဆိုပြီးသူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်။. အေးမြတ်သူနဲ့ အတူ နှစ်ဟောင်းကို နှုတ်ဆက်တဲ့စာလေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးလည်း မှတ်ချက်မှာ ရေးခဲ့ပါဦးနော်.။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ Cele Active World ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.။